Jon Boogz and Lil Buck: မိခင်ကမ္ဘာမြေကို ဂုဏ်ပြုဖို့ အက။ - English-Video.net
Jon Boogz and Lil Buck: မိခင်ကမ္ဘာမြေကို ဂုဏ်ပြုဖို့ အက။
လှုပ်ရှားမှု အနုပညာရှင် Jon Boogz နဲ့ Lil Buck တို့ဟာ "Honor thy mother" "သင့်မိခင်ကို ဂုဏ်ပြုပါ" ဆိုတဲ့ လူ့လောကနဲ့ သဘာဝတို့ကြားက ညှင်းဆဲခံနေရတဲ့ ဆက်ဆံရေးကို အရင်းခံထားတဲ့ သိမ်မွေ့၊ အားကောင်းလှတဲ့ နှုတ်ပြော၊ တယောနဲ့ အက တင်ဆက်မှုတစ်ခုကို ပွဲထုတ်ထားပါတယ်။
Mother Earth: Our end was imminent
yet finality relented.
ဒါပေမဲ့ အပြီးသတ်မှ ကောင်းလာတယ်
Wind, water and fire gently revived;
လေ၊ ရေနဲ့ မီး ညင်သာစွာ
you and I reconciled,
the blues gone green.
Your care in conserving
in exchange for my fruit
ငါ့အသီးကို ဖလှယ်ဖို့ စောင့်ရှောက်ခြင်းက
and replenishing this picturous
restoring of painted skies,
ဒီရှုခင်းကို ထပ်ဖြည့်ခြင်းနဲ့ ဆေးခြယ်
ထားတဲ့ ကောင်းကင်တွေ ပြန်ထိန်းသိမ်းခြင်းက
forest covering --
no more warming.
The purity and simplicity
ဖြုစင်ပုံ နဲ့ ရိုးစင်းပုံလေ
မင်းတို့ ငါ့ကို မှတ်မိလား
All I give to humanity?
Housing, land, seas, birds,
အိမ်ယာ မြေကွက်၊ ပင်လယ်တွေ၊ ကျေးငှက်တွေ
beast and all of mankind,
သားရိုင်းနဲ့ လူသား အားလုံးလေ
exclusively the interface
where you and the elements meet
မင်းတို့နဲ့ ဒြပ်စင်တွေ ဆုံတွေ့ပြီး
and vibrate harmoniously.
(Music tempo quickens)
(ဂီတ နရီ မြန်လာသည်)
My beauty altered,
muddied waters, fields stripped bare,
ရေတွေလည်း နောက်ကျိ၊ ကွင်းတွေလည်း
interior scarred beyond repair,
ပြင်မရနိုင်အောင် အတွင်းက အမာရွတ်ထင်ကာ
our memories eroding.
ငါတို့ရဲ့ အမှတ်ရမှုတွေ လျော့ပါးနေပေါ့
You once obsessed over my frame
ငါ့ကိုယ်လုံးကို တစ်ခါက မင်းတို့ စွဲလန်းခဲ့
and how I came to be;
my nature, its polarity --
ငါ့သဘာဝ၊ ၎င်းရဲ့ ဝိရောဓိ
how my sweet winds whisper softly,
yet assault seas.
ငါ့ရဲ့ သာယာတဲ့ လေတွေ တိုးညင်းစွာ ပြောပုံ
ဒါပေမဲ့ ပင်လယ်တွေကို ကျူးလွန်တယ်
beast and all of mankind --
The unseen traveler forever passing,
awning of earth felt and heard,
ခံစား၊ ကြားနာတဲ့ ကမ္ဘာမြေရဲ့ နေကာ
strong and stirring,
Breathe you in, cleansing wind,
gentle and still,
The source eternally here,
ရင်းမြစ်က ထာဝရ ဒီမှာ
ascent and descending:
fluid and graceful,
waves of serenity,
smooth strings of purity,
ဖြူစင်မှုရဲ့ ညက်ညောတဲ့ ကြိုးတွေ
rains replenishing rapidly,
မိုးတွေ ရုတ်ခြည်း ဖြည့်တင်းနေတယ်
rivers of dreams,
covering earth in abundance,
ကမ္ဘာမြေကို အလျှံပယ် ဖုံးလွှမ်း
universal solvent dissolving,
ကမ္ဘာကုန် ဖျော်ရည် ပျော်ဝင်နေ
drink, liquid, life and power:
သောက်သုံးပါ၊ အရည်၊ ဇီဝနဲ့ စွမ်းအား
Born when the universe was formed,
စကြာဝဠာ ဖြစ်တည်စဉ်က မွေးဖွားတယ်
gave him light,
colored rays illuminate ember flickers
မီးစ မှိုတ်တုတ်အလင်းရောင် ထွန်းလင်းခဲ့
incandescent, powerful and brilliant.
ဟုန်းဟုန်းတောက် ပြင်းထန်ကာ တောက်ပ
Sacred son of air, father of fury,
လေရဲ့ အထွတ်အမြတ်သားတော်၊ ဒေါသရဲ့ ဖခင်
heat dancing vigorously
အပူက အားမာန်ပါပါ ကခုန်နေတယ်
between perfection and beauty.
sparks of ingenuity rise:
ထွင်ဉာဏ်ရဲ့ မီးပွားတွေ လူးလွန့်-
(Canku One Star dances)
(Canku One Star ကသည်)
Jon Boogz and Lil Buck: မိခင်ကမ္ဘာမြေကို ဂုဏ်ပြုဖို့ အက။ | TED Talk | TED.com